Avibase အတွက်ကမ်းလှမ်းဘာသာစကားများအများအပြားကရက်ရက်ရောရောစေတနာ့ဝန်ထမ်းများကဘာသာပြန်ထားသောခဲ့ကြသည်။ အတော်များများကပိုဘာသာစကားများကို Google automated ဘာသာပြန်ချက် tool ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ပြုသောအမှုခံခဲ့ရသည်။ သင် Avibase ကို web site ၏အရည်အသွေးတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ကူညီပေးဖို့ဆန္ဒရှိလျှင်, သင်အောက်က Tool ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ဘာသာပြန်ချက်ပံ့ပိုးခြင်းဖြင့်ဒါလုပ်နိုင်ပါတယ်။ အားလုံးပံ့ပိုးမှုများကို site ပေါ်တွင် posted မခံရမီကိုယ်တိုင်ပြန်လည်သုံးသပ်ပါလိမ့်မည်။
သင့်အီးမေးလ်လိပ်စာရိုက်ထည့်ပေးပါ, အမှု၌ငါ (ရွေးချယ်နိုင်) သည်သင်၏ဘာသာပြန်ချက်နှင့် ပတ်သက်. သငျသညျကိုဆက်သွယ်ရန်လိုအပ်သည်။
item အရေအတွက်ကို 1 - 40 | 41 - 80 | 81 - 120 | 121 - 160 | 161 - 200 | 201 - 240 | 241 - 280 | 281 - 320 | 321 - 360 | 361 - 400 | 401 - 440 | 441 - 480 | 481 - 520 | 521 - 560 | 561 - 600 | 601 - 640 | 641 - 680 | 681 - 720 | 721 - 760 | 761 - 800 | 801 - 840 | 841 - 880 | Next page
Item Translate ကနေ လူ့ဘာသာ AfrikaansCatalanCzechGermanEnglishSpanishFinnishFrenchHungarianInterlinguaIndonesianIcelandicItalianJapaneseLatvianDutchPolishPortugueseRussianSlovakSwedishUkrainian ရန် Translate လူ့ဘာသာ AfrikaansCatalanCzechGermanEnglishSpanishFinnishFrenchHungarianInterlinguaIndonesianIcelandicItalianJapaneseLatvianDutchPolishPortugueseRussianSlovakSwedishUkrainian Google ကဘာသာပြန် AmharicArabicAzerbaijaniByelorussianBulgarianBengaliBosnianCebuanoCorsicanWelshDanishGreekEsperantoEstonianBasqueFarsi (Persian)FilipinoFrisianIrishGalicianGujaratiHausaHaitian Creole FrenchHawaiianHebrewHindiHmongCroatianArmenianIgboJavaneseGeorgianKazakhCambodian (Khmer)KannadaKoreanKurdishKirghizScientificLuxembourgishLaothianLithuanianMalagasyMaoriMacedonianMalayalamMongolian (Cyrillic)MarathiMalayMalteseBurmeseNepaliNorwegianNyanjaPunjabiPashtoRomanianScotsSindhiSinhaleseSlovenianSamoanShonaSomaliAlbanianSerbianSesothoSundaneseSwahiliTamilTeluguTajikThaiTurkishUrduUzbekVietnameseXhosaYiddishYorubaChineseZulu
Avibase သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပြီး ၃၄၁,၇၀၇,၀၉၇ 24 ဇွန်လ 2003 ကတည်းကကြိမ်. © Denis Lepage | ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ